विवाह प्रस्ताव - तपाईंले ठूलो दिनको लागि खर्च गर्न आवश्यक सबै कुरा | बेजिया
सुसाना Godoy | 13/01/2022 16:00 | बोडस
तपाईंको विवाह प्रस्ताव मनाउने अर्को ठूलो परम्परा हो जुन आज पनि पछ्याइएको छ। यद्यपि यो सत्य हो कि प्रोटोकल अब पहिलेको जस्तो छैन। थप रूपमा, यो सधैं दम्पतीको मनपर्ने हुनेछ, तर त्यसो भए पनि, हामी तपाईंलाई विचारहरूको श्रृंखला दिनेछौं ताकि तपाईं पलको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको प्रस्ताव ठूलो विवरणमा.
किनभने जब हामी हाम्रो विवाहको घोषणा गर्छौं, त्यहाँ सधैं धेरै विशेष क्षणहरू छन् र सबै ठूलो दिनमा पर्दैनन्। यसैले हामी हाम्रा मानिसहरूसँग हामीले चालेका प्रत्येक कदमको आनन्द लिन सक्छौं। शुभ चरणहरू जुन हामी सधैं साझेदारी गर्न चाहन्छौं र त्यसैले तपाईंको प्रस्ताव पछाडि छोडिने थिएन।
1 हातको प्रस्ताव के छ
2 प्रस्तावमा के गरिन्छ
3 जोडीलाई के दिने
4 बिहे गर्नुभन्दा कति समय अगाडि नै गरिन्छ
हातको प्रस्ताव के छ
कहिलेकाहीं हामी प्रस्ताव र विवाहको लागि सोध्ने क्षण संग गडबड को एक बिट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि प्रत्येक दम्पतीसँग केहि विचारहरू हुन्छन् र ती ती हुन् जुन उनीहरूले पूरा गर्नुपर्छ, किनकि विगतको जस्तो प्रोटोकल अब छैन। यसबाट सुरु गरेर, यो सत्य हो कि विवाहको लागि सोध्नु एक विशेष क्षण हो जब दम्पतीको एक भागले घोषणा गर्दछ र त्यो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव गर्दछ। तर प्रस्ताव भनेको उत्सवको अर्को क्षण हो, प्रियजनहरूसँग भेट्ने जसमा अनुरोध मनाइन्छ। लामो समय पहिले यो एक झन् जटिल प्रक्रिया थियो, किनभने यो दुलहा थियो जसले दुलहीको बुबालाई विवाह गर्न 'अनुमति' माग्न्थ्यो। त्यहाँ परिवारको अन्तिम शब्द थियो। आज सबै कुरा राम्रोको लागि परिवर्तन भएको छ!
प्रस्तावमा के गरिन्छ
यो हामीलाई पहिले नै स्पष्ट छ यो एक पार्टी हो, यद्यपि विवाह भन्दा सानो। आमाबाबु, दाजुभाइ वा नजिकको परिवार मात्र उहाँ उहाँकहाँ आउने एक हुनुहुनेछ। तसर्थ, तपाईं सधैं राम्रो रेस्टुरेन्टमा रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ वा अतिथिहरूले पनि प्रशंसा गर्ने घर पार्टी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक बैठक हो र यो विवाहको नजिक हुनु हुँदैन, केहि भन्दा बढी ताकि यसले हामीलाई समस्या बिना एक र अर्को व्यवस्थित गर्न समय दिन्छ। जब तपाईंसँग ठाउँ हुन्छ, तपाईं यसलाई सरल र रोमान्टिक तरिकाले सजाउन सक्नुहुन्छ, अवसरको लागि फूल र फूलदानहरू। त्यसै गरी, तपाईले केहि फरक मेनु रोज्न सक्नुहुन्छ, सधैं प्रत्येक डिनरको आवश्यकताहरू पूरा गर्दै। लंच वा डिनरको अतिरिक्त, जोडीहरू बीच उपहारको आदानप्रदान पनि हुन्छ।
जोडीलाई के दिने
हामीले पहिले नै थाहा पाएका छौं कि विवाहको अनुरोधको समयमा औंठी त्यो उपस्थित हुन्छ। त्यसकारण, यस क्षणको लागि हामी अन्य विकल्पहरू छोड्न सक्छौं। उदाहरण को लागी, यो उनको लागि हुन सक्छ एउटा क्लासिक घडी वा स्मार्ट घडी, केही कफलिङ्कहरू, उसले सङ्कलन गर्ने कुनै किसिमको वस्तु, आदि जबकि उनको लागि तपाईं कंगन, नेकलेस वा चोकर र झुम्काको रूपमा गहनाहरू पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। तर सायद केही सहायकहरू जस्तै राम्रो बेल्ट वा जुत्ताले तपाईंलाई छक्क पार्न सक्छ। तपाइँ सबै प्रोटोकल छोड्न सक्नुहुन्छ र उसलाई आश्चर्यचकित गर्ने विचारको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ!
बिहे गर्नुभन्दा कति समय अगाडि नै गरिन्छ
हामीले उल्लेख गर्नु अघि यो विवाहको धेरै नजिक थिएन, यदि तपाइँ केहि मौलिक गर्न चाहनुहुन्छ र तपाइँसँग योजना गर्न धेरै छ। तर व्यापक रूपमा बोल्नेवा अझ राम्रो के हो भने विवाहको प्रस्ताव आएको4वा6महिना बित्छ। यो सत्य हो कि कहिलेकाहीँ यो धेरै अलग वा केवल विपरीत हुन्छ। किनभने यो प्रत्येक जोडीमा निर्भर हुनेछ। तिनीहरूमध्ये धेरैले अब यो बिन्दुलाई रोज्दैनन् र विवाहको अनुरोध भए पनि तिनीहरू सिधै विवाहमा जान्छन्। के तपाइँ तपाइँको प्रस्ताव शैली मा राख्न चाहनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » बोडस » शैलीमा आफ्नो प्रस्ताव मनाउनुहोस्!